Kondwani Munthali: Bilaogeran’ny Taona ao Malawi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2012 2:55 GMT
Sambany teo amin'ny tantaran'ny media ao Malawi no ekena ho fanao manana ny anjara toerany eo amin'ny fanaovan-gazety ny famahanana bolongana. Izany no nanaraka ny fanomezandoka ilay bilaogera sady mpanao gazety Kondwani Munthali niarahana tamin'ny Lokan'ny famahanam-bolongan‘ny taona avy amin'ny Media Institute of Southern Africa (MISA). Ao anatin'ny andro fankalazana ny Andron'ny fahalalahana an-gazety manerantany tamin'ny 3 mey tao Lilongwe ny fankatoavana.
Nanomboka nibilaogy tamin'ny 2007, efa manodidina ny 5000 isan'andro ankehitriny ny mpitsidika ny bilaoginy. Ao amin'ity tafatafa nifanaovan'i Victor Kaonga tamin'i Munthali no hahalalàna bebe kokoa momba ny fiainany mibilaogy sy ny loka MISA.
Victor Kaonga (VK): Nanantena ny ho mpibilaogin'ny taona ve ianao raha marihina fa sambany tao Malawi no nanana ity sokajy ity ny MISA?
Kondwani Munthali (KM): Maro ny olona niteny tamiko izany. Tsindraindray tadiavina aho no mba mifaninana ary tsy izaho koa no nampiditra ahy hifaninana tamin'izy ity. Tamin'ny alalan'ny safidin'ny olona no nahatafita ahy. Mahatsiaro omem-boninahitra aho raha eritreretin'ireo mitovy asa amiko ho nahavita asa tsara. Saingy araka izay efa nolazaiko, misy ireo mpibilaogy mahafatra-po heveriko ho mendrika ny loka, saingy ny mpanao gazety eto Malawi no mihevitra fa izaho no tsara kokoa ary zava-niainana mampanetry tena izany.
VK: Naninona ianao no nibilaogy?
KM: Nisy bilaogera Malawita roa, Dr. Steve Sharra sy Victor Kaonga narahiko raha mbola tany amin'ny Nieman Fellowship tao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard aho tamin'ny 2007. Tsy nanao vaovao loatra izy ireo fa ny famakafakany amin'izay lohahevitra mahasahana an'i Malawi no nataondry zareo. Nieritreritra aho fa manome endrika ny fahafahana izarana ny hevitrao amin'ny mpamaky bebe kokoa ny bilaogy. Saingy rehefa olon'ny famoaham-baovao nandritra ny taona maro, tsy maintsy nanoratra vitsy kokoa momba ny hevitro aho ary nanoratra bebe kokoa ny vaovao. Lasa bilaogim-baovao moa izy izao.
VK: Iza avy ireo tena mpamakinao?
KM: Mahaliana aloha ny fahitana ny fitomboan'ny mpamaky rehefa nametraka ny rohin'ny fanavaozam-baovao tao amin'ny pejy Facebook sy ny kaonty Twitter aho. Avy any Malawi ny ankamaroan'ny mpitsidika ny bilaogiko izay mahatalanjona tokoa. Arahin'i Etazonia amin'ny resaka sasantsasany, Misy olona koa avy any Romania izay tafiditra anatin'ny firenena be mpitsidika folo voalohany. Raha raisina tsirairay, matoky aho fa mpanapa-kevitra, , diplomaty, politisianina ary olon-tsotra eto Malawi no mamaky ny bilaogiko. Mahazo antso avy amin'ny olona isan-karazany hatrany aho na mpampahatsiahy fa tsy namoaka vaovao. Mahatsiaro ho henin-kaja manana olona maro mitsidika ny bilaogiko ary miandry izay hoteneniko.
VK: Efa natahotra ve ianao noho ny famahanam-bolongana?
KM: Eny, tafiditra tanaty savorovoro politika i Malawi tao anatin'ny roa taona. Eny fa na dia ny orinasa – Nation Publications Limited misy ahy aza tena nanohana tokoa nandritra ny fotoana nenjehin'ny fitondrana izahay noho ny famahanam-bolongana. Ny fanamby dia tsy tsy fanavahan'ny olona ny atao hoe hevitra sy ny zavamisy. Vitsy dia vitsy ny olona manaiky fa mananjò hilaza ny hevitro aho indrindra fa eo amin'ny resaka politika. Mety mahazo setriny, fanehoan-kevitra mahasosotra aho na mahazo ompa tsotra izao. Nanatsara ny fiarovan-tenako aho fa isaorana Andriamanitra tsy mbola nisy zavatra nahazo ahy ary malalaka indray aho hanoratra izay tiako hosoratana!
VK: Azonao atao ve ny mizara ny iray na ny roa amin'ny lahatsoratrao misongadina?
KM: Voalohany ny account of July 20. Rehefa nidaroka any niaraka tamin'ny mpitarika ny fiaraha-monim-pirenena ny polisy tao amin'ny CCAP Lilongwe, rehefa nahita azy ireo nihaza sy mamotika ny fakantsariko, eritreritro tamin'io minitra io ny handositra. Saingy taoriana nilentika tamiko fa mety nahafaty anay iny fotoana iny ary tsy nivoatra ho tsara ny toe-draharaha ny andro manaraka. Nanoratra isa-minitra ny zava-misy aho tamin'izay. Io avy eo no zava-nisy be mpanaraka indrindra manerantany tamin'io andro io.
Ny faharoa kosa tamin'ny fahafatesan'ny filoha Bingu wa Mutharika sy ny fitanitainana tamin'ny fanemorana ny filazana ny fahafatesany. Ny Zoma hariva 6 Avrily rehefa nihaino ny kabarin'ny filankevitry ny minisitra tamin'izany nanambara fa tsy tokony handray ny fahefana ny filoha lefitra Joyce Banda, nanoratra aho tamin'ny misasakalina tany ho any miantso izay manana ny fahefana tamin'io alina io hisafidy ny araka ny voalazan'ny lalampanorenana. Maro dia maro ny antso azoko, nisy ny nandrahona fa maro kosa no nieritreritra fa mety izay nosoratako momba ny tetezamita. Rehefa niantso hisiana valan-dresaka vetivety ny filoha Joyce Banda ny maraina, fantatro tamin'izay fotoana izay fa tafadify ny ratsy indrindra ny fireneko. Ireo no heveriko fa roa tsara indrindra tamin'izay nosoratako.
VK: Soso-kevitrao ho an'ny mpibilaogy indrindra fa ho an'i Atsimon'i Afrika.
KM: Ny tsiambaratelo dia ny manoratra hatrany, eny fa na dia tsy azonao aza izay soratanao. Manokatra anao ho amin'ny tontolo midadasika kokoa ny bilaogy. Manampy antsika hanome antontan-kevitra momba ny firenentsika sy ny faritra amin'ny alalan'ny voambolana antsika manokana. Mifandray amin'ny tany manontolo isika ary izay lazaintsika no manefy ny fisainan'ny olona momba ny faritra misy antsika. Izao no fotoana hamahanam-bolongana hatrany mandra-pahenoana na aiza na aiza ny tantarantsika!
Miarahaba an'i Munthali amin'ity loka tsara azony ity ny Global Voices Online indrindra fa ny mpibilaogy avy aty atsimon'i Afrika.
*Hajiantsary: Kondwani Munthali mandray ny lokany. Nakana ny sary: Bilaogin'i Munthali